Dowlad Goboleedka Hirshabeelle waxaa is weeydiin u baahan magaalooyika qeeymaha leh ay leeydahay Hirshabelle waa tuma. - Damqo
Dowlad Goboleedka Hirshabeelle waxaa is weeydiin u baahan magaalooyika qeeymaha leh ay leeydahay Hirshabelle waa tuma.
(DMN) : Talyaniga – Taliska Qeybta 27aad ee Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed oo rabo in dadka laga barto ayaa Amar kasoo saaray kaasoo ah In Wax Hub ah lagu dhex qaadan karin Magaalooyinka Dowlad Goboleedka Hirshabeelle waxaa is weeydiin u baahan magaalooyika qeeymaha leh ay leeydahay Hirshabelle waa tuma.
Taliyaha Qeybta 27aad ee Ciidanka Qalabka Sida Gen. Maxamuud Macalin Koronto oo Awaamiirtan ay kasoo baxday Xafiiskiisa ayaa u baahan in asaga su’aasha lagu celiyo si oo faahfaahin uga bixiyo waxoo arintaas ula jeedo ,
waxaa lagu sheegay in guud ahaan hub laga Mamnuucay in lagu dhex wato Magaalooyinka Hirshabeelle.
Previous Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa ka hor yimid 3da qodob e gudomiye Mursal
Next Gudoomiye Mursal ayaa maya ka cuskaday in Koofur Galbeed Soomaaliya la burburiyo.